Liiska A of Top 5 talinayo Video converters
> Resource > Video > Top 5 talinayo Video converters
Waa maxay sababta oo markii aannu u baahan tahay in ay isticmaalaan Converter video ah? Waxaa inta badan markii fariin soo booda ee akhriska screen in faylasha uploaded yihiin 'ma taageersana', 'qaab aan sax ahayn' ama 'aan la aqoonsan'. Si kastaba ha ahaatee, waxaa aad u badan yihiin video converters kala duwan halkaas. Sidee baannu u socday si uu u ogaado midka si wanaagsan ugu shaqeyn lahaayeen noo taraya? Daacadnimadii, waa mid aad u ahaado. Dadka qaarkood ayaa kaliya u baahan tahay diinta ka fudud oo degdeg ah oo weel file ee (ie ka AVI ah in MP4), halka kuwo kale ay u baahan tahay waxaa laga yaabaa hagaajin dheeraad ah oo ku adag (sida in la beddelo heerka jir ah, heerka xoogaa ama codec).
Sidaa awgeed, waxaan sameeyay liiska Top 5 talinayo Video converters in rajeynayaa idiin gargaari karaa in uu go'aan ka mid ah a video Converter ugu wanaagsan. Sababaha in la tixgeliyaa safafka ka binta in ay waafaqsan nidaamka qalliinka ee; istareexsan ee la isticmaalo oo ku salaysan nidaamka interface ee; dib u eegista user ee; kala duwan oo ka mid ah qaababka wax soo saarka oo ay taageerayaan iyo iwm
Product Magaca iyo Isirrada sar AHV Video Converter Wondershare Video Converter Ultimate Xilisoft Video Converter Ultimate 7 Leawo Video Converter Pro Kasta oo Video Converter Ultimate
Kaliya for Windows Windows iyo Mac Windows iyo Mac Windows iyo Mac Windows iyo Mac
Review User ee
Strong Strong Dhexdhexaad Dhexdhexaad Dhexdhexaad
(Dhibaato isticmaalka) Easy in ay isticmaalaan Easy in ay isticmaalaan Ma aha macnaheedu bilowga ah Dhexdhexaad Dhexdhexaad
Waxaa la dhisay-in Editor
Waxaa la dhisay-in Media Player
(Kaliya ka non-DRM DVD)
Sare Sare Dhexdhexaad Dhexdhexaad Low
Sida lagu soo bandhigay shaxda sare ku xusan, 4 ka mid ah 5 sare talinayaa video converters lihin labada Windows iyo Mac ka hawlgala kumbiyuutarada marka laga reebo AHV Video Converter, taas oo macnaheedu kaliya ee Windows. Kala duwan oo qiimo la mid ah markii ugu horeysay saddex video converters, halka farqiga ma aha in la taaban karo marka loo eego Leawo Video Converter Pro. In la eego binta, kasta Video Converter Ultimate hogaaminaya liiska ka. Laakiin waa arrin ku lid ku ah marka ay timaado in tartamayaan qaababka bixiyeen.
Haddii aadan ku cusub tahay diinta video iyo raadinayso Converter video ah oo bixiya wax yar oo ah wax kasta, oo aan soo jeediyo ugu wanaagsan ee uu noqon doono mid ka mid Xilisoft Video Converter Ultimate 7 ama Leawo Video Converter Pro. Waxa kale oo xusid mudan in Leawo Video Converter Pro waa wax yar ka fududahay in ay maraan. Labada of software la qiimeeyo 'Dhexdhexaad' ku salaysan dib u eegis isticmaala.
Si kastaba ha ahaatee, haddii aad u baahan tahay doorashada ballaaran ee wax soo saarka doorashooyin aad video diinta, dib u eegis user xoog leh sidoo user-friendly interface; ikhtiyaarkaaga ugu wanaagsan ee uu noqon doono mid ka mid Wondershare Video Converter Ultimate ama AHV Video Converter. Mar labaad, ka biyodiiday ee AHV marka la barbar dhigo Wondershare waa in ay ka loogu tala galay oo keliya Windows iyo waxa ay sidoo kale ma taageeri diinta Dufcaddii. Hadda, waxa ay si aad u!
Top 4k Content Guide Waxaad u
Mpg Player: Sida loo Play Mpg Files in Windows / Mac (Leopard Snow mid)